Ividiyo: Imfihlelo yokweba Iziphumo zeNjini yokukhangela
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 6, 2012 NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 6, 2012 Douglas Karr
Ngale ntsasa ndithumela eyethu uqeqesho lokuthengisa abantu umfanekiso-skrini… iphepha 1 lokukhangela Uqeqesho lweSandler lokuthengisa. Into eyahlukileyo malunga neziphumo zephepha kukuba kukho iziphumo zevidiyo kuyo-kwiziko loqeqesho likaCharlotte Sandler. Isihloko sevidiyo kunye nenkcazo zilungiselelwe kakuhle ukuyifumana kwiziphumo zokukhangela.
Le vidiyo ithatha ingqalelo enkulu njengowona mfanekiso uboniswe kwiphepha, kwaye ndiqinisekile ukuba izinga lokucofa lihle. Inkcazo yevidiyo ikwaqala ngekhonkco elibuyela ngqo kwindawo yabo yokudibanisa, nayo, ukunceda ukuqhuba ukuguqulwa. Inkampani yabazali babo ayibavumeli ukuba basebenzise okanye basebenze kwiwebhusayithi yabo, ngenxa yoko ukubanakho ukubeka iividiyo kunokuba yeyona ndlela ibalaseleyo kula maziko oqeqesho ekufumaneni ingqalelo kwiinjini zokukhangela.
Ayisiyiyo iYouTube kuphela yesibini enkulu injini yokukhangela kwihlabathi, bakwabonisa iziphumo zevidiyo njengecandelo kwiziphumo ezininzi zeinjini yokukhangela kuGoogle. Abantu abaninzi abafuni kufunda… bafuna ukutsiba baye kwividiyo. Ngenxa yoko, ividiyo ibe yimfihlo yexesha elide yeenkampani zentengiso ezingenayo, ngakumbi kumaphepha anegama lokukhangela elinokhuphiswano. Lo mzekelo ungasentla mkhulu… noqeqesho lokuthengisa uSandler kuzo zonke izixeko ezikhulu, bonke bazamela isikhundla kwaye iinkampani zoqeqesho kukhuphiswano lokuthengisa zifuna ezo ziphumo zophando!
Ividiyo ngokukhawuleza iba yinxalenye ebalulekileyo yenkampani yokwazisa abathengi, iinkonzo zentengiso kunye nokwandisa ubukho bewebhu. Ukwakha amandla okuma kweYouTube kwisoftware yethu ye-SEO kubonelela abathengi bethu ngolwazi olubalulekileyo lokuqinisekisa ukuba ishishini labo okanye inkonzo ivela kwiphepha lokuqala le-YouTube kunye noGoogle. UKrista LaRiviere, uCofounder kunye ne-CEO, Iilebhu zeShift
Ividiyo ibaluleke kakhulu, enyanisweni, ukuba iinkampani ziyayithanda Iilebhu zeShift ndibandakanyiwe Ukulandela ividiyo ye-Youtube ngqo kwiiplatifti zabo zokwenza uphando:
Iilebhu zeShift ikwabonelele abathengi bayo ngevidiyo ukubanceda ukuba basebenzise iividiyo zabo ze-YouTube kumgangatho ophuculweyo:
Isihloko sesithuba, inkcazo kunye neethegi zizinto eziphambili zokusebenzisa amagama aphambili ngokufanelekileyo. Zama ukusebenzisa amagama aphambili njengamagama okuqala kunokuba kwindawo esembindini okanye eyokugqibela kwisihloko nakwinkcazo. Ukuba unyanzela iindwendwe ukuba zibuyele kwindawo yakho, sicebisa kakhulu ukubeka i-URL njengeyona nxalenye yokuqala yenkcazo. I-YouTube ibonisa umgca wokuqala wenkcazo ngaphandle kokuba ucofe ukwanda, ke ukuba nekhonkco eboniswe ngokucacileyo iya kuvelisa ukugcwala kwabantu abaninzi kwindawo yakho.
Ekhohlo xa kuthelekiswa nabathengisi abaQinisekisiweyo
Mar 31, 2012 ngo-3: 13 AM
UDouglas, kulungile ukuba uchaze ukubaluleka kweevidiyo. Kodwa ndixelele into ibenye: Ngaba kufuneka ndiyilayishe eyam ividiyo okanye ndingakhetha ividiyo ehambelana nayo kwiYouTube, umzekelo?
Ndibuza oku kuba rhoqo, iibhlogger azinazo izixhobo zokurekhoda ividiyo kwaye uyilayishe.